Isbadallada Dhacdooyinka! W/Q: Jamaal Cabdinaasir | Laashin iyo Hal-abuur
Isbadallada Dhacdooyinka! W/Q: Jamaal Cabdinaasir
Dhacdooyinka nolosha waa kuwa isdaba joog ah hadba dhinac iska taaga, farxadi waa faan, wareerna waa caajis oo idilkoodba aadamaha way soo maraan iyagoo ka soo duulaya maraaxil iyo jihooyin kala duwan. Muuqaalladaas waxay sidaan isbadallo kala duwan ruuxii faraxsanaa waaberigii hore caweyska galbeed wuu wareersan yahay kii wareersanaana warkiisaba daa. Kolka nolosha ay maqaamkaa aynnu ugaranno waa marka aynnu isdaba mareen ku sameynno nolosha oo iska wareejinno waxa ay inala jeclaato. Dhacdooyinku waxay maraan habab tagto iyo timaado, ruux ku sarqaama tagtadiisa kolkaad dooddaan kula tiigsada gooraheygii hore hagaag, ruuxna wuxuu baraxtiraa timaado uu ku faanayo goorta uu gaaro.
Tusaale; dhalinyaradeenna soomaaliyeed waxaa oodda innaga jafay guluf wada mustaqbal oo dhallinteenna utashaday si ruux kasta uu mustaqbalka ku tashado inta ka horraysanna aan qaddiyadaha saxda aan ufaragashan oo dareemihiisa garasho ay daawasho tagaan naqdin, dhaleeceyn iyo garasho bahdilantay ay goobaha kaga faaqidaan. Bal maxaa ka soo baxayo haddii lagu tashto timaaddo aan qaddarkeeda laheyn kaliya ifafaalo rajo loo qummanyahay, kolkaasna lagabay howlihii maalmeed!!
Asalka banaanba hab-fikradda ku wareegga gooraha soo socdo iyagoon aragti maan-galeed sidan,waxay jawaasiis unoqdaan gooraha dambo oo jiilka ay lagaaraan ugu sheekeeya musiibooyin ay nolosha kala kulmeen.
Nolosha waxaa sifeysa xeerar loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si la isu waafajiyo xeerarka dabiiciga ah iyo kan uu aadamaha goostay. Xeerarkaasi waxay isugu jiraan kuwa uu aadamaha ku sifoowo iyo kuwa uu ka tillaabsado. Xeerarkaasi dhacdooyin bay sitaan waxay gooyaan waddo la maro oo raad leh oo bulsho kasta ka faa’ideysato. Dhacdooyinkaasi waxay ka marag kacaan taariikhaha oo asalkooduba dhacdo isu rogtay kolkaana raad-raacyo noqodeen.
Haddii aynnu ulaabanno fiigta kore ee dhacdooyinka isbadala uu aadamahana ku wareera, waxaa dhacdo in noloshaada ay tahay baraare iyo deggenaan, wax-barasho aad heysato, guri barwaaqo leh iwm. Sidaa iyadoo nolosha kugu socoto baa dhacdadii isbadalka sidatay oo daawashana ku jirtay sida nolosha ay kugu socotay bay ka maseyreysaa dhacdadii macaaneyd kolkaana ay hirdan adag galaan kadibna laga guuleysto oo caqlabiyad adag kaga gaashaantanto dhacdadii adkeyd ee kuu horseedeyso wareer, daruuf adag, garasho hoosaad iwm. Xaaladdaa kolkii aad maareydo baa waxaad galeysaa mowjad adag oo hirarkeedu ay waaweyn yihiin oo is difaac aadan gali karin, kolkaa aad asxaabtaada is aragtaan kugu yiraahdaan maxaa ku helay waayahan? Adigiina ku jawaabto nimanyahoow baryahan xaaladeydu way qasan tahay…. Baryo badan waxaa imaaneyso daruuf adag oo lacagtii ay kaa haaddo markaana aad asxaabtaadii aad ka deynsato lacag kuna tiraahdo nimanyahoow markii aan lacag helo baan ku siin( baryahan shiid baa isoo weeraray)!! Waa halkaa aadamaha halka meel uu qiran karo oo garashadiisuba ay nooleyneyso inay jirto daruuf ka weyn garashadiisa oo ah xeer uu aadamaha sameystay, halka xeer dabiici uu jiro lagana soo tuuray xagga sare oo xeerka aadamahaba ka weyn. Halkaa markii ay mareyso buu aadamaha gartaa in isbadallo ay jiraan oo kolba wakhti ay soo food-saarto xaalad adag ama qumman.
Qirashada uu bini’aadam ka sameyso gooraha ay dabeecadda nolosha soo baraarugto, waxaa imaada dareen soke sheeganaya in rajo jirto oo sanduuqa rajadu ay furan tahay laakiin rajadu waxay awood yeelataa goortii is adkeyn, dadaal, alle bari la galo.
Dhacdooyinka uu bini’aadamku garwaaqsado waa kuwa si gun ah usaameeya halka kuwa kalana uu isagu saameeyo. Dhacdooyinka uu aadamaha ku tiirsanaado waxaa ka mid ah dhacdada barwaaqada oo ah asal meesha laga shidaal qaato, markii ay ku timaado xaalad adag wuxuu kula imaanayo qaacidooyin fudud uu isaguba isku qancinayo oo ah (waagi aan sidaas ahaan jiray soo ma ogid. Iwm)
Wuxuu ballaarinayaa qaddiyaddii uu ku noolaan jiray oo wuxuu doonayaa inuu barkin ka dhigto ama isku difaaco tagtadii baxday oo ma garto inuu waaqica iyo daruuftiisa ka run sheego. Ayeeyadeey baa iyadoo dooneysa inay ii sawirto rog-rogga isbadal ee sugan baa waxay ii bidhaamisay (nolosho waxay xayuubisaa ciddii aan oggoleyn in ay jirto kufid kaliya oggol socod, waxay iigu dartay in nolosha ay kala wareeg ay leedahay oo kolba isgoys uun gawaarida ay buux dhaafiyaan halka isgoys kalana uu faaruq yahay oo tiiho u dhimanayo, marka waa innaynu oggolaannaa isgoysyada ay camirto nolosha)!!
Wadciga sidiisaba wuxuu maldahaa asalka nolosha, halka daruufuhu ay soo saaraan asalka nolosha waana heybta saxda ah ee labadooduba ay qabtaan.
Goor kasta waxaa soo ambabaxo aragtiyo quraafaad ah iyagoon soo marin wadciga ama waaqica la joogo, waxaynna ka dar-daarmaan isbadalada soo socdo kolkaasna umaddu waxay ujiheysmaan sugitaan iyo udhoolacadeyn markaa bay howl iyo juhdina aysan la imaaneynin.
Fursado baa ku jirta isbadallada waxay ubaahan yihiin in loo il-furnaado kaliya isbadal kastaa waa in loo gartaa jaanis inoo furmaya oo aynan ugaran wax joogitaan leh markasta.